Sunday July 26, 2015 - 22:43:28 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay mas'uul ka ahaayeen camaliyadii istish-haadiga aheyd ee burburisay Hoteelka Jazeera magaalada Muqdisho.
Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere Afhayeenka Al Shabaab ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay si faah faahsan uga hadlay weerarkii guulaystay ee ka dhacay Hoteelka Jazeera ee kaabiga ku haya garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Wuxuu sheegay in mid kamida guutada istish-haadiyiinta Mujaahidiinta oo kaxaynayay gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay uu camaliyad ku galay Hoteelka Aljazeera oo xilligaasi ay ku kulansanaayeen saraakiil katirsan DF-ka iyo saraakiil shisheeye Caddaan ah kuwaasi oo ka shirayay sidii loo dardar gelin lahaa xasuuqa iyo duullaanada gardarrada ah ee ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed.
Afhayeenka ayaa xaqiijiyay in mujaahidkii weerarka fuliyay uu ka dhax dusay dhammaan jidgooyooyinkii adkaa ee dhanka amniga kuwaasi oo ku xeen daabnaa Hoteelka Jazeera oo uu sheekh Cali dheere ku sifeeyay saldhig cadawga oo lagasoo maleego shirqoollada umadda Soomaaliyeed.
Weerarka Hoteel Jazeera oo Jawaab celin iyo aargud u ahaa Xasuuqii Cadawgu u geystay Shacabka Soomaaliyeed.
Xarakada Al Shabaab waxay sheegtay in weerarkii Hoteelka uu ahaa aargudka dadkii lagu xasuuqay gobollada Bay,Bakool iyo shabeelaha Hoose oo ciidamada Itoobiya iyo kuwa AMISOM ay boqolaal qof shacab ah ku dileen.
Khasaaraha ka dhashay weerarka.
Sheekh Cali Dheere wuxuu sheegay in qaraxa khasaara xooggan uu kasoo gaaray saraakiisha Sirdoonka DF-ka iyo dad ajaanib ah balse cadawgu uu isku dayayo in uu qariyo.
Baaq ku socda shacabka Rayidka ah si howlgallada mujaahidiinta aysan u wax yeelayn.
Sheekh Cali dheere ayaa ka hadlay waxyeellada dadka shacabka ah kasoo gaarta howgallada mujaahidiinta ee magaalada Muqdisho wuxuuna sheegay in inta karaan kooda ah ay ku dadaalaan in aysan waxba gaarin shacabka muslimiinta.
Wuxuu ugu baaqay dadka rayidka ah in ay ka fogaadaan goobaha cadawga ”dhibkiina iyo dhiigiina marabno ee ka fogaada xarumaha cadawga sida hotellada,xarumaha hay’adaha iyo dhammaan goobaha ay ka dhawyihiin saraakiisha murtadiinta iyo gaalada,xurmada dhiigga muslimiinta meel sare ayuu naga joogaa waxa aan u dagaalamayno waa sidii aan cadawga dhiigga idinka daadinaya idinkaga difaaci laheyn” ayuu yiri sheekh cali dheere.
Halkan ka dhageyso Shirka Jaraa'id Ee Sh.Cali Dheere MP3